ဆင်တူရိုးမှားသတိထားအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၁၁) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on August 1, 2014 at 12:37 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
canon နှင့် cannon
canon သည် (က) စည်းမျဉ်း၊ ပြဌာန်းချက်၊ ကျမ်းရင်း၊ (ခ) ခရစ်ယာန်ပင်မအသင်းတော်၏ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်သည်။ (ဂ) စာဆိုတစ်ဦးဦးအမှန်တကယ်ရေးသည်ဟု လက်ခံထားသောစာများ ကျမ်းများဖြစ်သည်။
This play offends against all the canons of good taste. ဤပြဇာတ်သည် ပြဇာတ်ကောင်း ဂုဏ်အင်္ဂါပြဌာန်းချက်တို့မှ သွေဖီလျက်ရှိသည်။
the Shakespearean canon ရှိတ်စပီးယားလက်ရာများ
cannon သည် အမြောက် လက်နက်ဖြစ်သည်။
A canon isalarge gun. အမြောက်သည် လက်နက်ကြီး ဖြစ်သည်။
canvas နှင့် canvass
canvas သည် noun ဖြစ်သည်။ uncountable အနေနှင့်သုံးသည့်အခါ ရွက်ဖျင်တဲ၊ သင်္ဘောရွက် လုပ်ရာတွင်သုံးသည့် အ၀တ်ကြမ်းဖြစ်သည်။ countable အနေနှင့်သုံးသည့်အခါ ပန်းချီဆရာတို့ ဆီဆေးပန်းချီဆွဲသည့် အောက်ခံပိတ်သား၊ ပန်းချီကား ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
Canvas isarough cloth. ကင်းဗတ်သည် ဖျင်ကြမ်းဖြစ်သည်။
I love sleeping under canvas. ကျွန်တော်သည် ရွက်ဖျင်တဲနှင့် အိပ်ရသည်ကိုနှစ်သက်သည်။
These two canvases by Hockney would sell for £500 000. ဟော့က်နီး၏ ဤပန်းချီကားနှစ်ချပ်သည် ပေါင် ငါးသိန်းမျှနှင့်ရောင်းထွက်မည်။
canvass သည် နိုင်ငံရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးသည်။ တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်းလိုက်ကာ မဲဆွယ်သည်ဟူသည့် verb ဖြစ်သည်။ အခြားအဓိပ္ပါယ်အနေနှင့် ဆန္ဒခံယူသည်။ လူအများဆန္ဒကို မေးမြန်းသည်ဟုလည်းသုံးလေ့ရှိသည်။
I've been out canvassing for the Labour Party every evening this week. ကျွန်တော် ဒီတစ်ပတ်အတွင်း အလုပ်သမားပါတီအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ထွက်နေသည်။
The council has been canvassing local opinion/local people to get their thoughts on the proposed housing development. အဆိုပြုထားသည့် အိမ်ရာစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် လူထုသဘောထားအမြင်များ သိနိုင်ရန် လေ့လာမေးမြန်းလျက်ရှိသည်။
capital punishment နှင့် corporal punishment
capital punishment သည် သေဒဏ် တစ်နည်းအားဖြင့် the death penalty ဖြစ်သည်။ corporal punishment ကတော့ ရိုက်နှက်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။
cast နှင့် caste
cast သည် (က) ပြဇာတ်၊ ရုပ်ရှင်တစ်ခုတွင်ပါဝင်မည့်သရုပ်ဆောင်များကိုရွေးချယ်သည်။
(ခ) ပုံစံခွက်၊ မို plaster cast (ဂ) အရိပ်ကျစေသည် ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
He was often cast as the villain. သူသည် မကြာခဏ လူဆိုးခန်းမှ သရုပ်ဆောင်ရ လေ့ရှိသည်။
The moon castawhite light into the room. လသည်အခန်းတွင်အဖြူရောင်အလင်းတန်းတစ်ခု ဖြန့်ခင်းပေးထားသည်။
caste သည် ဟိန္ဒူအမျိုးဇာတ်ခွဲခြားမှုစံနစ်ဖြစ်သည်။
high-caste Brahmins ဗြဟ္မဏဇာတ်မြင့်
the caste system ဇာတ်နိမ့်ဇာတ်မြင့်ခွဲခြားသည့်စံနစ်
censer ၊ censor နှင့် censure
censer သည် ဘာသာရေးအခမ်းအနားများတွင် အမွေးတိုင်ထည့်သည့်ခွက်၊ အမွေးနံ့သာမီးမြှိုက်ပူဇော်သည့် ခွက်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၄င်းစကားလုံးအား အချို့အဘိဓါန်များတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြမထားပါ။
censor ကတော့ စာအုပ်စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ပြဇာတ်တစ်ခုခုအား လူထုသို့မတင်ပြမီ အများပြည်သူသို့ ပြသသင့်မသင့် ဆုံးဖြတ် တည်းဖြတ်ပေးသည့် တာဝန်ယူရသည့်ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဖြစ်သည်။
The book was heavily censored when first published. ထိုစာအုပ်သည် ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေစဉ်က ပြင်းထန်စွာ တည်းဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။
censorship of the press စာနယ်ဇင်း တည်းဖြတ်မှု
censure သည် အပြုအမူတစ်ရပ်အတွက် ပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုပြုခြင်းဖြစ်သည်။
သူ၏မရိုးသားသည့်အပြုအမူသည် အပြင်းအထန် ပြစ်တင်ရှုတ်ချခံရသည်။
centenarian နှင့် centurion
centenarian သည် အနည်းဆုံးအသက်တစ်ရာနေရသူဖြစ်သည်။
centurion သည် ရှေးခေတ်ရောမစစ်တပ်တွင် တပ်သားတစ်ရာကို အုပ်ချုပ်ရသူ တပ်မှူးဖြစ်သည်။
cereal နှင့် serial
cereal သည် ကောက်နှံပင်၊ နှံစားပင်မှရသည့် အနှံအစေ့တို့နှင့်ပြုလုပ်ထားသည့် စားသောက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
cereal crops နှံစားကောက်ပဲသီးနှံပင်များ
She eatsabowl of cereal every morning. သူမသည်မနက်တိုင်း ကွေကာတစ်ပန်းကန် သောက်သည်။
serial သည် အစဉ်လိုက်ဖြစ်သော၊ အခန်းဆက်ဝတ္ထု၊ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းများကိုခေါ်သည်။
Most of her novels have been made into television serials at some time. သူမ၏၀တ္ထုရှည်အများစုသည် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ အဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ရသည်။
ceremonial နှင့် ceremonious
၄င်း adjective နှစ်ခုစလုံးသည် ceremony ဟူသည့် noun မှလာသည်။ ceremonial သည် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးအခမ်းနားများတွင်ပြုလုပ်သည့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။
a ceremonial dress ပွဲတက်ဝတ်စုံ
ceremonious ကတော့ ကိန်းကြီးခမ်းကြီးနိုင်သော၊ အလွန်အမင်းယဉ်ကျေးလွန်းဟန်ပြုသော အမူအရာကို သုံးသည်။
He shook hands ceremoniously with each of his supporters as they arrived. သူ့ပရိတ်သတ်နှင့်အမူပိုပို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်။
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Lost/Talk/Tell/That/Up)